DOWNLOAD British Diyaaradaha Corporation BAC 1-11 FS2004 - Rikoooo
downloads 15 180
Diyaaradaha ganacsiga ee Bac 111. La yaab yaab leh oo tayo leh. Albaabada hore iyo gadaaluba way furan yihiin. doorashada dayactiro badan. Moodeelka Duulista Wanaagsan. Qolka muuqaal u dhaw xaqiiqda. Codadka quruxda "dib u noqoshada". Liistada Hubinta oo dhameystiran ka hor inta aan laga qaadin iyo nidaamka kormeerka duulimaadka. Diyaarad ay tahay inaadan ka maqnaan FS9! Aan Lahayn FSX.
The British Diyaaradaha Corporation 1-11 (ama BAC 1-11) ahaa reaction diyaarad British, 1960-duwan gaaban iyo 1970. Naqshada waxaa ka Ugaarsiga Diyaaradaha (ee), waxaa la horumariyo oo soo saaray by British Diyaaradaha Corporation ka dib markii saarayaasha ugu waaweyn ee Ingiriiska ayaa ku biireen in 1960.
The BAC 1-11 waxaa loogu talagalay in lagu bedelo Viscount Vickers ah. Wuxuu ahaa jet-shixnad gaaban labaad, isagoo ugu horeysay ee Sud Aviation Caravelle. Sababo la xiriira ka dib ay ku soo galeen adeega, waxay faa'iido BAC 1-11 ee matoorada ku ool ah oo waayo-aragnimo weyn ee tigoodu. Tani dhigay isaga oo caan ah oo leh ugu bilaabay, nus ka mid ah iibka ay dalka Mareykanka. The BAC 1-11 ahaa dayuuradood British ugu guulaha badan, oo lagu hayay adeeg ilaa 1990s, markii uu laga saaray sababtoo ah xayiraad buuq.